girl Archives - Tameelay
မိန်းမသားတို့ ရင်ဖွင့်ရာ Group မှာ လာရောက်ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာလေးတွေ မျှဝေခဲ့တာဆိုရင် အမှတ်စဉ်လေးတွေနဲ့ (၁၁) ထိပြီးခဲ့ပါပြီ . . . အခု အမှတ်စဉ် (၁၂) အနေနဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက် ရင်ဖွင့်ထားတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် . . . အတွေ့အကြုံဆိုတာ ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အရာမို့ သူတစ်ပါးအတွေ့အကြုံကနေ သင်ခန်းစာ အတုယူစရာတွေ ယူနိုင်ကြပါစေ ကျွန်မ အိမ်ထောင်ကွဲတဲ့အချိန်အသက်၄၄ နှစ် အဲ့အချိန် ကိုယ်နေခဲ့တဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့အကြည့် အဆိုးဆုံးက ယောကျ်ားသားတွေရဲ့မျက်လုံးချက်ချင်းပြောင်းလည်းသွားခဲ့တယ်။ ဆိုင်ထိုင်ပြီး အမြဲတမ်း ကိုယ့်ကို လှလှပပ သပ်သပ်ယပ်ယပ်နေတတ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ယောကျ်ားရှိစဉ်က ကြည့်ခဲ့ကြတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ယောကျ်ားနဲ့ကွာရှင်းပြီးချိန် ကြည့်ကြတဲ့ မျက်လုံးမတူသလိုဘယ်သွားသွားဘယ်လာလာ မျက်လုံးဒေါင့်ထောက် ကြည့်နေကြတာကတမျိုး ။ ဒီကြားထဲ … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 25, girl
မိန်းမသားတို့ ရင်ဖွင့်ရာ Group မှာ လာရောက်ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ ရင္ဖြင့္စာ (၃)
Group ထဲမှာ မေးခွန်းတွေ ရင်ဖွင့်စာတွေ အများကြီးမှာ မိန်းမသားတွေ အိမ်ထောင်ကျသွားပြီးရင် အလုပ်ဆက်လုပ်သင့်လားဆိုတာ ထိပ်ဆုံးကပါလာတယ် ။ မိန်းမသားတွေအိမ် ထောင်ကျသွားရင် အလုပ်ဆက်ပြီး လုပ်သင့်လား မလုပ်သင့်ဘူးလား။ ဒီမေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထင်အမြင် အမျိုးမျိုးရှိကြပေမယ့် ကျွန်မအမြင်ကတော့ လုပ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ပိုပြီးတောင်လုပ်သင့်ပါသေးတယ် ။ ကိုယ့်မှာကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အခါ ကိုယ်က အလုပ်မလုပ်တဲ့အခါ အိမ်ထောင်ဖက်ယောကျာ်းရဲ့ ပြောသမျှခံ လိမ်သမျှ ခံနေရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် သူတို့ဖောက်ပြန်နေတာသိသိနဲ့လည်း ကိုယ့်မှာဝင်ငွေမရှိအလုပ်မရှိတော့ သူ့ပဲမှီခိုအားထားနေရတော့ သိသိကြီးနဲ့ ရင်ကွဲခံ စိတ်ညစ်ခံနေရပါလိမ့်မယ် ။ နောက်တစ်ခုက အလုပ်မရှိတဲ့အခါ အရည်အသွေးတွေ ကျသွားတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ အားနည်းလာတတ်ပါတယ်။ အစိုးမရတဲ့ သခါၤရလောကကြီးမှာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို အားကိုးပြီး အလုပ်ထွက်ပြီး အလုပ်မလုပ်ဘဲ နေပါပြီတဲ့ တစ်သက်လုံး သူကကိုယ့်ကို တာဝန်ယူနိုင်မှာလား? … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 02, girl
မိန်းမသားတို့ ရင်ဖွင့်ရာ Group မှာ လာရောက်ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ
မိန်းမသားတို့ ရင်ဖွင့်ရာ Group မှာ လာရောက်ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာလေးနဲ့ အဖွဲ့ဝင်သမီးလေးတို့ရဲ့ အဖြေတစ်ချို့ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ညီမစာလေးကျော်မသွားပါနဲ့။ ညီမကောင်လေးနဲ့၆နှစ်လောက်တွဲခဲ့တာ။ သူက ညီမထက်အသက်၇နှစ်ကြီးပါတယ်။ သူ ကအစကအရမ်းကောင်းပါတယ်ညီမအပေါ် နောက်ပိုင်းကြ အချိန်မပေးနိုင်တာကစပြီး။ မသိတစ်မျိုးသိတစ်မျိူး ကောင်မလေးနဲ့ကြူ တယ်။ပြီးတော့အလုပ်ထဲကကောင်မနဲ့တွဲနေတယ်။ ကိုယ်နောက်ဆုတ်ပေးမယ်တွဲဆိုတော့မတွဲဘူး။ ဟိုဘက်က မိန်းမကမလုပ်ရက်ဘူး ဘာညာနဲ့နောက်ဆုတ်ပေးမယ်ဘာညာနဲ့။ဟိုကောင်ကရော။ ညီမကို..မပြတ်နိုင်ဘူးပြောတယ်။ သူစကားတွေကြောင့်တစ်ကယ်ချစ်တယ်ဘဲထင်ခဲ့တာ။ သူနဲ့ညီမကအနေဝေးနေတာများတာ။ ညီမမှာနေ့တိုင့်လိုလိုphမဆက်လို့ပူလောင်ရတာတစ်မျိုး။ နောက်ပိုင်းဖောက်ပြန်တော့ပိုပူလောင်ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်း းသူက စကားတောင်ရင့်သီးတာတွေပြောလာတယ်။ ညီမမှာ သူ့ကို ဘယ်ချိန်phဆက်ဆက်မအားလို့ပင်ပန်းလို့နဲ့များတယ်။ ဘီယာလည်းသူသောက်တယ်။ ညီမ သည်းခံခဲ့ပါတယ်အချိန်တစ်ခုထိ။ ၆နှစ်ကို၂နှစ်လောက်ထိ ဘဲပျော်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းနေ့တိုင်းလိုလိုငိုရတယ်။ktvကစော်ကိုမိန်းမလို့ခေါထားတာလည်းတွေ့ရတယ်။ ညီမသူ့ကို အဆုံးထိမပြတ်နိုင်လို့သည်းခံပြီးပါပြီ။ နောက်တော့ ညီမ သူ့ကို ဘယ်လိုမှ ယုံလို့မရတော့ဘူး။ အမြဲသူက လိမ်နေတာ။ ပြီးရင် ပြန်မေးမေ့နေပြီမသိဘူးဆိုတာနဲ့။အဲ့ကြောင့်ညီမ ဘဲ သူ့ကိုဖြတ်မယ် ကြိုးစားလည်းအရင်ကဆို၄ရက်လောက်ထိဘဲနေနိုင်ခဲ့တယ်။ … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 01, girl
ကိုယ့်မိသားစုအေးချမ်းမှုဟာ ကိုယ့်စကားတစ်ခွန်းပေါ်မူတည်နေတယ်ဆိုတာ မေ့မထားလိုက်ပါနဲ့။
April 25, 2020 by Tameelay
အချစ်ဆုံး ချစ်ခင်ပွန်း ဖတ်ကြည့်ပေးပါ…. မိသားစုအတွက်အပြုံး မိန်းမ ရော့မင်းကြိုက်တာဝယ်ကြိုက်တာသုံးဆိုတဲ့၊စကားထက်…. မိန်းမ အပြင်အတူသွားကြမယ်လေပြင်ဆင်လိုက်၊ ဘာလိုချင်လည်း လိုက်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့၊စကား အသုံးပြုမှုလေးကပိုနွေးထွေးကျေနပ်စေရတာပါ။ မိန်းမ စားနှင့်ကွာ ဝမ်းမှမဆုံတာဆိုတဲ့၊စကားထက်….. မိန်းမခဏတော့စောင့်ပေးနော်၊ဗိုက်ဆာပေမယ့်အလုပ်မပီးသေးလို့ပါဆိုတဲ့၊ စကားအသွားအလာလေးကပိုစိတ်ကျေနပ်စေရတာပါ။ မိန်းမ အိမ်အသုံးစရိတ်ကကုန်လှချည်လားဆိုတဲ့၊စကားထက်….. မိန်းမကုန်ဈေးနှုန်းအခြအနေဘယ်လိုလဲ၊လောက်အောင် ချင့်ချိန်ဝယ်ကြည့်ပေါ့ကွာ မလောက်ရင်ပြောပေါ့ဆိုတဲ့၊စကားလုံးလေးတွေရဲ့ ချုပ်ထိန်းသွားမှုက ပိုမလာတဲ့ အသုံးစရိတ်နောက်မှာစိတ်သက်သာရာ ရစေတာပါ။ မိန်းမ အချေအတင်မဖြစ်ချင်ဘူးကွာဆိုတဲ့၊စကားထက်….. မိန်းမ ဘာအလိုမကျတာရှိလည်းညှိနှိုင်းကြမယ်ပြောကြည့်ဆိုတဲ့ ၁၀မိနစ်စာအချိန်ပေးလမ်းဖွင့်မှုကပိုအကျိုးသက်ရောက်စေတာပါ။ မိန်းမ ပင်ပန်းတယ်ကွာအဆင်ပြေပြေနေရအောင်ဆိုတဲ့၊စကားထက်….. မိန်းမဒီနေ့တော့ဘယ်လုပ်ငန်း ဘယ်အကြောင်းအရာမှာအဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုပီး သူငယ်ချင်းနဲ့ပြောသလိုရင်ဖွင့်ချပြောပြလိုက်တာကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စိတ်အဖုအထစ်ပြေလျော့စေတာပါ။ မိန်းမ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေစမ်းပါဆိုတဲ့၊စကားထက်….. မိန်းမနေကောင်းကျန်းမာရဲ့လား၊ဘာတွေစိတ်တိုင်းမကျတာရှိလည်းလို့ တစ်လမှာ တစ်ကြိမ်လောက်မေးလိုက်ရင်ကိုစကားများရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိသလောက်နည်းပါးလာမှာပါ။ မိန်းမသားတိုင်းကခင်ပွန်းဝေယျာဝစ္စ၊သားသမီးဝေယျာဝစ္စ၊မိဘရှိရင်မိဘဝေယျာဝစ္စ၊အိမ်မှုကိစ္စ၊အကုန် တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေရတာမို့ငွေရှာရုံနဲ့တာဝန်ကျေပီမထင်ပါနဲ့၊ ပြည့်စုံအောင်ထားပေးနိုင်ရုံနဲ့ပြီးမြောက်ပီမထင်ပါနဲ့၊ လိုလေသေးမရှိဖြည့်ဆည်းပေးရုံနဲ့မလိုအပ်တာမရှိတော့ဘူးမထင်ပါနဲ့။ စကားတစ်ခွန်းကလက်ဆောင်တစ်ခုထက်ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်၊ စကားကအားဖြစ်စေတာနေရာအတော်များများမှာမို့၊ကိုယ့်မိသားစုအေးချမ်းမှုဟာကိုယ့်စကားတစ်ခွန်းပေါ်မူတည်နေတာမေ့မထားပါနဲ့။ ကိုယ်ပင်ပန်းသလိုတနေကုန်မနားတမ်းမျက်လုံးထဲချွေးဝင်သည်ထိ၊ ဝေယျာဝစ္စတွေလုပ်နေရတဲ့မှီခိုဇနီးသည်ဟာ၊သူ့ကိုပြန်မှီခိုနေသူတွေအတွက်သူ့အပြုံးဟာအရေးပါတာမို့။ မိန်းမသားတို့အတွက်ရင်ဖွင့်ရာ အခ်စ္ဆံုး ခ်စ္ခင္ပြန္း ဖတ္ၾကည့္ေပးပါ…. မိသားစုအတြက္အျပံဳး မိန္းမ ေရာ့မင္းႀကိဳက္တာဝယ္ႀကိဳက္တာသံုးဆိုတဲ့၊စကားထက္…. … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags girl
မိန်းခလေးတိုင်း အားကျအတုယူဖို့ သမီးလေးတို့အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် 2.2.2010မှာလက်ထပ်ခဲ့တယ် 24.1.2019မှာကွာရှင်းခဲ့ပီ(သူမနဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေ) 9နှစ်ပြည့်ဖို့၈ရက်ပဲလိုတော့တယ်. Anni Dateလဲမှတ်ထားမယ်မထင်…….. နှစ်ယောက်လုံးချစ်လို့လက်ထပ်ခဲ့တယ်. အစပိုင်းမှာအရမ်းတွေသာယာပီးအဆင်ပြေခဲ့တယ်. တပ်ထဲမှာနေရတာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းလဲ တပ်ထဲကသူတွေပဲသိတယ်. ခေတ်ရှေ့ပြေးပီးဖလန်းဖလန်းနေခဲ့တဲ့ကျမ တပ်ထဲမှာ အဘွားအိုလေးလိုနေခဲ့ရတယ်.အဆင်ပြေပါတယ် သူငွေသုံးကြမ်းတာလေးကလွှဲရင်ပေါ့. တဖြေးဖြေးသူ့အချိုးတွေပြောင်းလာခဲ့တယ်. ကျမကိုအရင်လိုဂရုမစိုက်တော့ဘူး. အိမ်လဲမကပ်တော့ဘူး ကျမအိပ်မှပြန်လာတတ်တယ်. တာဝန်ကျတဲ့နေရာက သူပုန်တပ်တွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ဖာပွန်မှာပါ ခေါင်ပါတယ် အစားအစာလဲရှားတယ် မီးလဲအချိန်နဲ့ပါ့ ဖုန်းလဲမမိပါဘူး လိုင်းသုံးလို့မရဘူးအဲ့တုန်းကပေါ့. ကျမနေရတဲ့အိမ်က တောင်ကုန်းပေါ်မှာအိမ်လုံးချင်းလေးတွေ တစ်အိမ်နဲ့တစ်အိမ်ကပ်မနေဘူး. တစ်နေ့နေ့သူပြန်အလာကို အိမ်အကျယ်ကြီးထဲမှာ သရဲအရမ်းကြောက်တတ်တဲ့ကျမ ကလေးလေးကိုဖက်ပီး စာင့်နေခဲ့တယ်. သူပြန်မလာတဲ့ညတွေဆို ဘယ်လောက်ခြောက်ခြားခဲ့ရလဲကို့ဘာသာကိုအသိဆုံး. ဘတ်ထရီမီးကလဲတဖြေးဖြေးမှိန်မှိန်လာတယ် အပျင်းပြေစရာ သမီးလေးမျက်နှာပဲထိုင်ကြည့်ပီးမိုးလင်းခဲ့ရတယ်. အိမ်မှာအမေက ဘာမှမခိုင်းဘဲ ဘောကြော့နေလာတဲ့ကျမ ခုတော့ဟင်းချက်လဲကျမ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလဲကျမ အဝတ်လျှော်လဲကျမ ကလေးထိန်းလဲကျမ ကို့ကိုယ်ကိုတောင် အဲ့လောက်လုပ်နိုင်ခဲ့မယ်မထင်ထားဘူး အိမ်အကူလဲခေါ်လို့မရ ရဲမေဆိုတာလဲ အမြလာမပေးနိူင်ဘူးလေ အရေးထဲက … Read more
Categories facebook ပေါ်မှ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ, General Knowledge Tags 12, girl